Xaflad furitaan Markis cusub oo ay hergalisay Jimciyada Al-Wafaa oo lagu qabtay degmada Buur-hakaba ee G/Bay.
SOMALITALK - BAY
Xaflad aad loo soo agaasimay talogalkeeduna ahaa furitaan Markas cusub oo ay soo qabanqaabisay Jimciyada Samafalka ee Al-wafaa ayaa maanta (Nov 17, 2008) lagu qabtay Degmada Buur-hakaba ee Gobolka Bay.
Markaskan dhismahiisa ayaa ka kooban Masaajid weyn, 8 qol oo jiif ah, 5 qol oo Iskuul ah, 4 qol maamulka Markaska, Hool ardayda ku cunteeyaan oo hal Kushiin oo cuntada lagu kariyo. Markaskan ayaa ah mid ay u dhan yahiin dhamaan qeybihiisa dhismo oo aad u qurux badan.
Jimciyadda Samafalka Al-wafaa oo ku guuleysatay hergelinta dhismaha Markaskan ayaa garabsatay Hay’adda Caalamiga ah ee Guddiga Qaaradda Afrika (African Continent Committee) ee Jamciyadda Axyaa Al-Turaath Al-Islami (Revival of Islamic Heritage Society), Dhaqaalaha dhismaha Markaska ku baxay waxaa ku tabarucay Daariq Khaliifa Axmed Al-Jaasim oo u dhashay dalka Kuwait.
Xaflada Furitaanka Markaska ayaa waxaa ka soo qeybgalay dad aad u fara badan oo caan ka ah degmada Buur-Hakaba ee Gobolka Bay, sida: Ugaas Aadan Cabdi Xasan, Culuma’udiinka Shaekh C/laahi Janaay, Mas’uul ka mid ah Mas,uuliyiinta Degmada Mudane Maxamed Cabdi Hassan (awkaarey), Aqoonyahanada: Cali Amiin Cabdiyow, Haweenka: Sitey Sheekh Yarrow, iyo marti sharaf kale oo ka timid magaalada Muqdisho uuna hor kacayay Xoghayaha guud ee Jamciyadda Al-wafaa Mudane Sayid Cali Xuseen, Madaxa Mashaariicda iyo Qorshenta Mudane Maxamed Xassan Maxamed (Aayow) iyo madaxa arrimaha Bulshada ee Al-wafaa Ibraahim Cali Yarow.
Xoghayaha guud ee Jamciyadda Al-wafaa Sayid Cali Xuseen Macalin oo ka mid ah howlwadeenada Al-wafaa ayaa sheegay in dhismaha markaskan qayb ka tahay waxbarasho ay ka faa’iideysan karaan 200-arday agoon ah, labada galin subax iyo galab.
Waxaana ka mid ahaa waxyaalihii uu yiri “Reer Buur-hakaba waa kan Markiskii oo waa idin dhisan yahay, waxuuna xujo ku yahay dhamaan dadka dagan Buur-hakaba haddii wax lagu baran waayo ama laga faa’iidaysan waayo wuxuu noqonayaa mid lagu qasaaray oo amaama-laahi laydin su’aali doono”.
Mas’uulkii ku Hadlaayay Mas’uuliyiinta degmada Buur-Hakaba Maxamed Cabdi Xassan (Awkarey) ayaa kusoo dhaweeyay dhamaan kasoo qeyb galayaasha xaflada furitaanka Markiska, waxuuna u mahadceliyay Jimciyadahii gacanta ka geestay in halkan Markis laga dhiso.
Markaskan ayaa waxaa soo dhaweeyay dadka ku dhaqan degmada Buur-hakaba sheegayna inay baahi weyn u qabeen waxbarashada waxayna soo jeediyeen codsi ah inuu Markiskan ahaado dugsi Dhexe iyo Sare, madaama ay waxbarashada sare u doonan jireen Baydhabo ama Muqdisho taana ay fursad u tahay inay ka faa’iideystaan baahida ka jirto deegaankooda dhinaca waxbarashada
Codsigaasina waxaa soo dhaweeyay mas’uuliyiinta Al-wafaa inay sidaa ku bilaabato waxbarashada asaasiga iyo tan sare waxaana laga bilaabay qorista caruurta Agoonta ee dagana Buurhakaba.
Jimciyada Samafalka ee Al-wafaa oo astaanteeda lagu arko goballo iyo degmooyin badan oo dalka ah ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay labalaabtay gacantii ay u fidin jirtay dad tabaaleysan si ay wax uga geysato qeybo ka mid ah baahida ay qabaan dadka Soomaaliyeed.